14 Qodob Oo Barlamaanku Ku Dhaliilay Wasaaradda Amniga Puntland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / 14 Qodob Oo Barlamaanku Ku Dhaliilay Wasaaradda Amniga Puntland
14 Qodob Oo Barlamaanku Ku Dhaliilay Wasaaradda Amniga Puntland
June 19, 2019 - By: HORSEED STAFF
Guddiga amniga ee Barlamaanka Puntland ayaa shalay gollaha u gudbiyay warbixin isugu jirtay dhaliil iyo tallo soo jeedin la xiriirta Wasaaradda amniga Puntland.
Guddigu waxay ku dhalileen Wasiirka amniga Puntland C/samad Maxamed Gallan uu ka gaabsaday wada shaqayntii dastuuriga ahayd ee gollaha wakiiladda ka dhaxaysa, isagoo jabiyay qodob ka mid ah dastuurka Puntland.
Guddigu waxay warbixintooda ku sheegeen inay jirto wadashaqaynt la’aan ka dhaxaysa wasaaradda iyo hay’adda amniga iyo kuwa sirdoonka Puntland, waxay kaloo ku dhaliileen inuu shaqaalaysiiyay dhalinyaro aan la tababarin, taasi oo dhalisay amniga xumo gobolka Bari.
Qaar ka mid ah qodobadii Lagu Dhaliilay Wasiirka Amniga Puntland.
Qorshaha wasaaradda kama muuqato haba yaraatee waxa la xiira amniga xuduudaha gaar ahaan xad-gudubka maamulka Somaliland iyo dhulka Puntland ee ay haysato.
Waxay ka gaabisay inay wax muuqda ka fuliso qorshihii u deganaa.
Wasiirka wasaaradda amnigu wuxuu ka baaqsaday wada shaqayntii dastuuriga ahayd ee golaha wakiilada ka dhexaysay, wuxuuna jebiyey qodobada 59aad iyo 64aad ee dastuurka Puntland, mana jirto wax warbixin ah oo ay golaha u soo gudbiyeen.
Wasaaraddu waxay qaada lacago aan waafaqsanayn nidaamka maaliyadeed ee Puntland kuwaas oo ay ka mid yihiin lacagta dal-ku-galka (Visa) oo dhan $25 ( laabatan iyo shan doolar) iyo lacagta ruqsada dal ku joogga shaqaalaha ajnebiga ah ee shaqooyinka joogtada ah oo dhan $100 ( boqol dollar) waxayna kku go’aan warqad lacag qabasho la’aan (Receipt)
Waxaa cabasho iyo tabasho ka jirtaa wada shaqaynta wasaaradda iyo qaybo ka mid ah hay’adaha amniga.
Waxaa fadhiid ah oo aan shaqayn waaxda DDR-ta ee wasaaradda taas oo ahayd waax muhiim u aha arrimaha amniga guud ee dalka.
Xil Wareejintii taliyah qaybta gobolka Mudug oo aan lagu darin hal gaari ah oo ah xaajiyad Hilix oo ay lahaayeen Booliiska isku dhafka ah ee Gobolku, arrintaasina waxay saamayn ku yeelan doontaa qorshaha tobaka sano ee dib-udhiska booliiska Puntland.
Wasiirku wuxuu sifo sharci daro ah ku ciidameeyey kuna hubeeyay rag dhalinyaro da’yar ah oo arday ah, waxaana ka dhashay amni xumo gooblka Bari ku soo Korortay, Maadaama aaney qabin wax tababar ah, lana rabey in laga dhigo qarsoonayaal, taas lidkeedana la faafiyey cid kastana loo socda si .
Magaalada Bosaso Waxay u baahan tahay hanaanka Booliiska Dadweynaha, Wasiirku wuxuu hareermay hanaankaas.
Dhaliilaha loo soo jeediyay Wasiirka amniga Puntland waxaa ka mid ahaa inuu kaxaytay Baabuur aan xabadu karin oo ay lahayd Hay’adda Sirdoonka ee PISS. Sidoo kale Guddigu amniga waxay soo bandhigeen dhibaatooyin ragaadiyay shaqooyinkii Hay’adda PISS.
Wasiirrka Amniga Puntland C/samad Gallan oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ku sugnaa goboladda Bari iyo Sanaag ayaa hadda ku sugan magaaladda Muqdisho, waxaana la filayaa inuu hortego barlamaanka si uu uga jawaabo dhaliilaha loo soo jeediyayay.
AKHRISO WARBIXINTA GUDDIGA AMNIGA BARLAMAANKA